Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - ညစ်ညမ်းမှု၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အရက်နှင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်းတို့က၎င်းအားမည်သို့အထောက်အကူပြုသည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းခြောက်ခု။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Amin Herati (2019) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
porn, ဆိုင်ကယ်စီးနင်း, အရက်နှင့်နေမကောင်း-ကျန်းမာရေးကြောင့်အထောက်အကူပြုဘယ်လောက်များနှင့်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခြောက်လနည်းလမ်းများ: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဆီးရောဂါပါရဂူအီဒီအာမင် Herati (2019)
ငယ်ရွယ်ပြီးအသက်ကြီးသော, တစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်မနိုင်အကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြီးမားဆုံးအချက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များလည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်ကချွတ်ဖုိ့မှယူနိုင်ပါတယ်ခြေလှမ်းများသျောရှိပါတယ်
တနင်္ဂနွေ, 05 သြဂုတ်လ 2018: ဆောင်းပါးပါ LINK
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ယောက်ျားအောင်မြင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်မနိုင်ဖြစ်စေသည့်အတွက်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတခုစိုက်ထူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ရှည်လျားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့လိင်အသက်, အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အိပ်ရာများတွင်ရံဖန်ရံခါအခက်အခဲ ED ဖွဲ့စည်းကြပါဘူး - ဒါကြောင့်ကျေနပ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှတဆင့်အနေနဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဇွဲနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့မကြာခဏအခြားသူများကိုပင်မိမိတို့၏ဆရာဝန်များနှင့်အတူကဆှေးနှေးဖို့ရွံမုန်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပေးထားသောယောက်ျားထင်စေခြင်းငှါ, ထက်ပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကိုအများအပြားအကြောင်းတရားများရှိပြီး, ရလဒ်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားအပေါ်သက်ရောက်မှု - ကအသက်အရွယ်နှင့်အတူ ပို. ပို. ပျံ့နှံ့ဖြစ်လာသော်လည်း။
သူတို့ရဲ့ 10s အတွက်သူတို့၏အမျိုးအရာခိုင်နှုန်း 40 အကြောင်း septuagenarians တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ 15s အတွက်တတိယနှင့်တစ်ဝက်, သူတို့ရဲ့ 50s ရာခိုင်နှုန်း 60 ခံရ၏။ ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီး, ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်း 20 အကြောင်းကိုခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်။
ဒေါက်တာအင်ဒရူး yip ​​ဝေ-Chun တစ်ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ဆီးရောဂါပါရဂူ, ED ရောဂါအားဖြင့်အဓိကအားစေသောပြုလုပ်နေပြီဟုဆိုသည်နှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရာခိုင်နှုန်း 80 အတွက်များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါနဲ့သွေးလက်စထရောကိုအဓိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်။
အခြေအနေကိုမကြာခဏနှလုံးရောဂါနှင့်အခြားသွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာများ၏အစောပိုင်းသတိပေးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်း, အပိုအသှေးကိုအတားမရှိစီးဆင်းနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ ကျန်းမာစီးဆင်းမှုနှောင့်ယှက်ဘာမှဥပမာ - သွေးကြောအဘို့, အရှိဆုံးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု, လေဖြတ်, နှင့်အခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏အမြစ်မှာသွေးလွှတ်ကြော-ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ငန်းစဉ် - လည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
သွေးကြောပြဿနာများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာသောကြောင့်, စိုက်ထူတဲ့လူသားရဲ့ယေဘုယျကျန်းမာရေးများအတွက်အသုံးဝင်သောဘာရိုမီတာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ American Heart Association ဆေးသမားအဘယ်သူမျှမကအခြားအန္တရာယ်အချက်များပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြရင်တောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်သောလူနာများတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များများအတွက်မျက်နှာပြင်ကြောင်းတိုကျတှနျးထားသ; ED စတင်ခြင်းနှစ်ခုမှငါးနှစ်အထိအားဖြင့်နှလုံးဖြစ်ရပ်များအရင်အဦးနေရာပေးနိုင်သည်။
မကြာခဏရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးတက်ရောက်သောစိတ်ဖိစီးမှုတတ်နိုင်သမျှအဖြစ်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ယေဘုယျစိတ်ဖိစီးမှုရှိသမျှတို့, ED အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဒေါက်တာ yip မှတ်ချက်ပြုနှင့်အမျှရောဂါဖြစ်ပွားမှုရာခိုင်နှုန်းအခြား 20 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ ဆရာဝန်တွေကဒီ "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း" ဟုခေါ်သော, ထိုသို့သိသာထင်ရှားစွာပင်လူသည်မိမိ "စွမ်းဆောင်ရည်" ခံစားရပိုမိုထိခိုက်နေသည်ကပိုသိသာဖြစ်လာသည်။
ဒေါက်တာအီဒီအာမင် Herati, United States မှာအဆိုပါဂျိမ်း Buchanan Brady ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအင်စတီကျုနှင့်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Baltimore အတွက်ဆေးပညာ၏ဂျွန်ဟော့ကင်းကျောင်း Urology ၏, မေရီလန်းမှာအထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၏ဒါရိုက်တာက "စွမ်းဆောင်ရည်" ကိစ္စရပ်များတွင်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်။
"အာရုံကိုပယ်ရှားအဖော်ရငျးနှီးထဲကနေဝင်" သည်အထိညစ်ညမ်း၏လေးလံသောစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တစ်ဦးချင်းစီ desensitise နိုင်ပါတယ်စဉ် "babyish မြော်လင့်လူနာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှု၏ရှိသညျထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုပါတယ်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများသိသိသာသာအထူးသဖြင့် 15 ထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင်, နောက်ဆုံး 40 နှစ်အတွင်းတိုးလာကြပါပြီ။ 2002, ဥရောပကနေ 23 လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်မှာအမေရိကန်, အာရှနှင့်သြစတြေးလျကြောင်းအသက်အရွယ်အုပ်စု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းနှစ်ခုရာခိုင်နှုန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောလေ့လာမှုတွေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်အပြင်းအထန်ကြောင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်း 15 ကဲ့သို့အများအပြားနှင့်အတူ, လူပျိုတို့ကိုပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လုလင်တို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောလိင်တံသွေးသယ်ဆောင်သောသွေးလွှတ်ကြောကိုပျက်စီးစေနိုငျသောဆိုင်ကယ်စီးနင်းအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်ပညာရေးသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်သည် - လူတို့သညျဧရိယာမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာအောက်မေ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်။
ထိုပြဿနာမှပံ့ပိုးစေခြင်းငှါဦးခေါင်းနှင့်နှလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းအပြင်တခြားအဘယ်သို့ပြုရနိုင်သနည်း သွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်လာဖို့အတိတ်ကာလ, ဒေါက်တာ yip ပြောပါတယ်, ဆရာဝန်တွေ, တစ်ဦးလေဟာနယ်သို့မဟုတ်လိင်တံစုပ်စက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် penile Prosthesis များအတွက်ခွဲစိတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ် vasodilatation ဆေးပညာ penile ထိုးပေးလေ့ရှိသည်။
စိုက်ထူကူညီဘို့အခံတွင်းဆေး 1998 အတွက်ဟောင်ကောင်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, သူကပြောပါတယ်။ Sildenafil (Viagra) 2003 အတွက် vardenafil (Levitra) နှင့် tadalafil (Cialis) ကနောက်တော်သို့လိုက်, ပါးစပ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခံတွင်းဆေးလုံခြုံပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ကြပြီးရာခိုင်နှုန်း 80 ၏ထိရောက်မှုနှုန်းနှင့်အတူအဓိကကုသမှုနည်းလမ်းကို, ဖြစ်လာကြပါပြီ။
avanafil (Stendra), အဟောင်းတွေမူးယစ်ဆေးဝါးများထက်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်ဖို့ကဆိုပါတယ်သော - မကြာသေးမီက yip ပြောပါတယ်အသစ်တစ်ခုခံတွင်းဆေးဟောင်ကောင်ရှိရရှိနိုင်ခဲ့။
"Gene ကုထုံး US ကပူပြင်းတဲ့သုတေသနခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ရလဒ်များကိုယခုအချိန်တွင်အထင်ကြီးနေကြသည်မဟုတ်" ဟုသူကထပ်ပြောသည်။
ED ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့စိတ်ပျက်စရာ, ယောက်ျားပြဿနာကိုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်ပပျောက်ရေးမှယူနိုင်ပါတယ်အများအပြားခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ Start နှင့်သင့်ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။ သငျသညျအကွောငျးကိုအထံတော်သို့စကားပြောခဲ့ကြသည့်ပထမဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်ကနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
1 ။ လေ့ကျင့်
3 ကီလိုမီတာ (နှစ်ခုမိုင်) တစ်ရက်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ် run ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ED ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ပင်ခွန်အားမရှိခြင်း reverse နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး 42 လက်မအရွယ် (107cm) ခါးနှင့်အတူယောက်ျား 50 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦး 32 လက်မအရွယ် (81cm) ခါးနှင့်အတူများထက် ED ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်။
ဒါဟာမသာအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းကိုယ်အလေးချိန်င်: လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအားကြီးသောစိုက်ထူဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သောသွေးစီးဆင်းမှု, ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါဟာအစ Viagra ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်သောသွေးကြောထဲမှာတိုးပွားလာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကြောင့်သွေးဖိအားပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အလေးချိန်-ဆောင်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ, erectile ခွန်အားကိုလိင် drive ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြည့်အဝသွေးသောသူကဲ့သို့ခံစားအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချက် testosterone ဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
2 ။ က Move
လေ့ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်လူသိများဆီးစပ်လေ့ကျင့်ခန်း, ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်မီးယပ်သားဖွားအာနိုး Kegel အားဖြင့် 1948 တှငျဖျောပွထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်သူတို့တစ်တွေကလေးအပ်ပြီးနောက်မိန်းမတို့အားဆရာဝန်များအားဖြင့်ထောက်ခံနှင့်အများဆုံးယောက်ျားသတိပြုမိကြသည်တစ်ခုခုမဟုတ်နေကြသည်။ , လိင်တံစိုက်ထူကာလအတွင်းအသွေးနှင့် engorge ရန်ခွင့်ပြုသည်သုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်းညှစ်ထုတ်လိုက်ခြင်း, ဆီးသွားခြင်းပြီးနောက်ဗလာအဆိုပါ urethra ကူညီပေးသည်: ဒါပေမယ့် Kegels သူတို့သုံးယောက်အမှုအရာမပေးသော bulbocavernosus ကြွက်သားခိုင်ခံ့သောကွောငျ့ဆီးတိုက်ကြီးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
3 ။ အရက်သောက် Quit
အရက်တစ်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားစိတ်ကျရောဂါသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးယာယီနှင့်ရေရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်ဘာသာရာ - အရက်သောက်မလုံလောက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကြောင့်လျော့နည်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်စေ, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် depresses ။
4 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်စားသုံးမှုကိုတိုးပှား
L-မိုင်နိုအက်စစ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်ကာစိုက်ထူ supporting အဘို့ဤမျှအရေးကြီးသောကြောင့်မှော်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လုပ်ကူညီပေးသည်တစ်ခုအမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်။ တစ်ဦးက 1999 လေ့လာမှု ED နှင့်အတူလူတို့တွင်နေ့စဉ်အုပ်ချုပ် L ကိုမိုင်နိုအက်စစ်၏ခြောက်ပတ်အတွင်း၏ဆိုးကျိုးများလေ့လာသည်။ L-မိုင်နိုအက်စစ်များတစ်နေ့လျှင်ငါးဂရမ်ကိုယူသောသူတို့အထဲမှတစ်ဦးကိုတတိယလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကြုံတွေ့။
5 ။ အခြို့သောဖရဲသီးဖူး
Citrulline, ဖရဲသီး၏အမြင့်ဆုံးပြင်းအားမှာတွေ့ရတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်, လိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်တွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်ဦးက 2011 လေ့လာမှု ED အလယ်အလတ်မှအပျော့စားခံစားခဲ့ရသူကိုယောက်ျားနှင့်အတူအဘယ်သူ erectile function ကိုအတွက်တိုးတက်မှုပြသ L-citrulline ဖြည့်စွက်ယူဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဖရဲသီးဖျော်ရည်ကို "သဘာဝရဲ့ Viagra" အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
6 ။ အကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုရယူလိုက်ပါ
ညံ့ဖျင်းသောအိပ်စက်ခြင်းပုံစံများ ED ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်း၏အဆင့်ဆင့်အကြားနှင့် Testosterone နဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့တူအရေးကြီးသောလိင်ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှု - ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်ရာ - တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာရှိပါသည်။ testosterone အဆင့်ဆင့်ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်, ဒါသေချာသင်အလုံအလောက်ရစေ။